Gịnị mara banyere Railway Ticket Ọha | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Gịnị mara banyere Railway Ticket Ọha
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 28/12/2019)
Kwa ụbọchị, ọ bụ a nkịtị n'anya ịhụ ọtụtụ puku njem na iji ụgbọ okporo ígwè. N'ihi ya, ọ bụ ihe ijuanya, na ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-mara dị ka ndị nyeere nke mba. enweghị, nke ha nwere ike ịbụ nnukwu ọgba aghara na ya nwere ike ime ka ọgba aghara na oké nsogbu.
Ebe ahụ kwuru na, nnweta nke tiketi na-aghọ a isi nke oge ọ bụla na-eme. Mgbe ị chọrọ ka akwụkwọ gị tiketi, gị mkpa iji hụ na tiketi dị na njikere.
Gịnị bụ iche iche nke ntinye akwụkwọ usoro?
Ị nwere dị iche iche iche iche nke na-azụ na ụgbọ okporo ígwè tiketi ndoputa. Ha na-tụkwasịrị nnọọ. The tụkwasịrị nnọọ na-abụkarị ndị kasị mmadụ jupụtara n'ihi na ndị njem na-abụghị akwụkwọ ha tiketi a ogige.
N'oge ememe ụfọdụ, ọ na-aghọ egwu na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eme njem n'ụgbọ okporo ígwè nwere ike mfe iru ọtụtụ narị. Ọ bụrụ na unu bụ ndị agadi ma ọ bụ nwere a anụ ahụ nke, mgbe ahụ, ọ kacha mma ka akwụkwọ a echekwabara ụgbọ okporo ogige kama tụkwasịrị nnọọ.
The ọzọ ụdị ogige bụ sleeper nchịkwa. The sleeper nchịkwa dị ka aha na-aga na-enyere gị iji zuru ike na-ehi ụra nile unu njem. Onye ọ bụla ụgbọ okporo ígwè na-abịa na ọ dịkarịa ala 10 bogies na- sleeper azụ.
Ị nwere ike mee ka gị onwe gị na ohiri isi na bed mpempe akwụkwọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Ezigbo maka ndị na-ejegharị ejegharị na a mmefu ego. The sleeper 3 EBIONITISM AC ogige dị ntụsara ahụ, bụ ubé n'elu sleeper nchịkwa Railway Ticket Ọha.
Ha bụ ubé oké ọnụ mgbe tụnyere sleeper nchịkwa n'ihi na ha nwere AC. The 2-EBIONITISM AC ogige bụ ihe ọzọ na usoro nke njem. ọ bụ ala na ị na-nyere na nnukwu okomoko.
The otu nwere ike kwuru banyere ndị mbụ na klas AC ogige. Nke ahụ bụ n'ihi na ị na-nyere na ụdị nke nzuzo, nke ị chọrọ. Nke a bụ ndị kasị oké ọnụ usoro nke na-eme njem. Egbu, oche ụgbọ ala.
Mgbe ị na-ejegharị ejegharị adịghị anya, mgbe ahụ ị nwere ike ịga njem eji oche ụgbọ ala. The n'ego ụgbọ ndị nta karịa nke mbụ na klas AC ụgbọ okporo ígwè tiketi ndoputa. Otú ọ dị, ị ga-achọ iji hụ na oche dị site SMS njikere ma ọ bụ online elele.
Iji PNR, i nwere ike hụ na gị na tiketi na-gbaa akwụkwọ. N'ikpeazụ, mkpa ka ị na-ahụ na oche dị. I nwere ike ime na site n'ịhụ ndị PNR ọnọdụ bụ ziri ezi n'ihu ị na-eme n'ihu Railway Ticket Ọha ntinye akwụkwọ.
Dị ka mgbe niile, ime gị ntinye akwụkwọ eji a pụrụ ịdabere na isi iyi nke ozi dị ka Save A Train.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fall-you-need-to-know-about-the-railway-ticket-reservation%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#reservation ụgbọ okporo ígwè tiketi ụgbọ oloko